ကျွန်ုပ်၏ရုံး Virtual Office FIDULINK ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
WWW.FIDULINK.COM > ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ? ကျွန်ုပ်၏ရုံး FIDULINK VIRTUAL ရုံး SOFTWARE
100% ONLINE စီမံခန့်ခွဲမှု & စီမံခန့်ခွဲမှု
MY ရုံး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအကြားတိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပေါ်တယ် FIDULINK. MY ရုံး ဖောက်သည်များကိုခွင့်ပြုသည့်အလွန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် FIDULINK ၄ င်းတို့၏ကုမ္ပဏီများအားစီမံခန့်ခွဲရာတွင်လွယ်ကူစေရန်၊ သူတို့၏ရုံး၊ Virtual ရုံး၊ စာရင်းကိုင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အခြားအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လည်းလွယ်ကူစေရန်။ FIDULINK.com
ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အခမဲ့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည် FIDULINK အဖွဲ့၏စီးပွားရေးစင်တာတစ်ခုမှအနည်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း FIDULINK.
ပလက်ဖောင်းသို့လုံခြုံစွာဝင်ရောက်ခွင့် MY ရုံး အသုံးပြုသူစကားဝှက်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်အတူ။ ပလက်ဖောင်းသည် 256 Bits SSL လက်မှတ်မှတစ်ဆင့်လုံခြုံရေးရှိသည်။
အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးသမားအတွက်ပလက်ဖောင်းဖန်တီးပါ MY ရုံး ယနေ့အထိရရှိနိုင်သမျှသောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများရှိသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ဖိုင်မန်နေဂျာနှင့်သင်၏စာရင်းကိုင်နှင့်သင်၏အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုပြုသည်။
Bitcoin (BTC) $ 62,761.00
Ethereum (ETH) $ 3,815.84
tethering (USDT) $ 0.999939
Binance အကြွေစေ့ (BNB) $ 488.05
ဆိုလာနာ (SOL) $ 157.09
Dogecoin (Duke) $ 0.245468
Binance အမေရိကန်ဒေါ်လာ (BUSD) $ 0.999957
Litecoin (LTC) $ 187.54
Monero (XMR) $ 256.36
Ethereum ဂန္ထဝင် (ETC) $ 52.67
ကြယ် (XLM) $ 0.374372
Bitcoin ငွေ (BCH) $ 610.50
dash (Dash) $ 190.98